Nagu saabsan - Tianjin Wangtong Warshadaha iyo Warshadaha wax lagu qurxiyo ee ganacsiga 'Lifen'
Warshada Tianjin Wangtong iyo Warshadaha la isku qurxiyo ee loo yaqaan 'Trade Lifen'waxay dhismayaan 1998, waxay leeyihiin khibrad 20 sano ka badan soo saarista waxyaabaha la isku qurxiyo ee gudaha. Waxaan leenahay taariikh dheer oo ah ganacsiga OEM / ODM Hadafkeenu waa in aan u oggolaanno macaamiisheenna in ay istcimaalaan waxyaabaha la isku qurxiyo.
Warshadeenu waxay ku soo saartay waxsoosaarka noocyada kala duwan ee suuqa gudaha, waxayna leeyihiin sumcad wanaagsan oo ku saabsan tayada wax soo saarka, waxaan ka caawinay noocyo badan inay ka koraan yar ilaa weyn. Warshadeenu waxay soo saari kartaa nooc kasta oo la isku qurxiyo iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Iyo sidoo kale, soo bandhigida warshaddeena qalabka wax soo saarka dhamaadka-caalamiga ah, oo ku takhasusay dhammaan noocyada waxsoosaarka waxsoosaarka, farsamaynta. Waxaan haynaa boqol kun oo aqoon isweydaarsi ah oo lagu sifeynayo, waxay hubin kartaa in alaabtayada lagu soo saaro jawi nadiif ah.
Waxaan haynaa tas-hiilaad xoog leh oo R & D ah iyo xarumo R & D oo dhameystiran. Baro teknolojiyada teknolojiyada teknolojiyad sare, nanotechnology, tikniyoolajiyadda osmotic, dareeraha teknolojiyadda 'microemulsion crystal'. Hadda waxaan haynaa in ka badan 2000 nooc oo ah qaaciddo bisil, alaabooyin inta badan la xiriira daryeelka wajiga, daryeelka jirka.
Maanta, aragtida gabow ayaa is beddeleysa iyada oo rajada cimriguna ay sii kordhayso isla markaana qaab nololeedyadu isbeddelayaan. Aynu isku duubnaano dhaqdhaqaaqa gabowga ee warshadaha qurxinta soo dhaweynta markaa xaqiiqda iyo intaas, quruxda gabowga oo ka sii wanaagsan.
Kooxdayada R & D waxay soo saareen taxane ah badbaado sare, soo-saaris, nuugid ka wanaagsan, saameyn muuqata oo muuqata astaamaha caanaha, maaddooyinka ay ka mid yihiin soosaarida dhirta Shiinaha, alaabta ceeriin ee la soo dhoofiyo, si loo hubiyo in alaabada ku habboon maqaarka xasaasiga ah.
Naqshadayaasha baakadaha wanaagsan, softiweerka kumbuyuutarka ee horumarsan, qalabka qalabka, si ay u bixiyaan adeegyo la-talin xirfadeed, adeegyo xirfad leh, sumcad wanaagsan ujeeddada ah in macaamiisha la siiyo alaab la hubo oo qanacsan
Nidaam maamul oo adag si loo hubiyo tayada geeddi-socod kasta. Iyadoo ay la socdaan injineero badan iyo kormeerayaal tayo leh, soo bandhigida khadadka wax soo saarka qurxinta ee heerka koowaad ee ajaanibta ah si loo hubiyo alaab tayo sare leh.